Siyanda isibalo sababulawa ama-E cigarettes
INTATHELI YESOLEZWE | October 1, 2019
SIYANDA isibalo sababulawa ama-E cigarettes emhlabeni. Lolu hlobo lokubhema olubuye lubizwe ngeVaping selujuqe ababalelwa ku-13 eMelika kanti kunokwesabela ukuthi lesi sibalo siyenyuka emhlabeni.
Ngokombiko we-US Centers for Disease Control and Prevention, bangu-805 abantu asebebikwe ukuba nezifo zamaphaphu ezihambelana nokubhema ama e-cigarette, kanti siyenyuka isibalo. Odokotela baseNingizimu Afrika bahlalele ovalweni lokuthi ukwenyuka kwesibalo sokusetshenziswa kwama E-cigarettes yintsha yakuleli kusho ukwenyuka kobungozi bezifo ezibulalayo njengalokhu okwenzeka eMelika.
Izinkampani ezikhiqiza ugwayi i-E cigarette zithi ukubhema i-E cigarette kuphephile uma kuqhathaniswa nokubhema ugwayi owejwayelekile, kepha odokotela bayakuhlaba lokhu. NgokweNational Center for Health Research, ugwayi owejwayelekile unamakhemikhali anobungozi kanti nayo ivaping inawo lamakhemikhali.
"Ugwayi ojwayelekile ungenza izifo ezifana nomdlavuza wamaphaphu, umdlavuza webele, i-emphysema, isifo senhliziyo kanye nezinye, kanti lezi zifo zingavela ngemuva kweminyaka eminingi umuntu ebhema. Ivaping yona ingadala ukudlikiza kanye nokulimala kanzima kwamaphaphu ngemuva konyaka nje umuntu eyibhema," kusho iNCHR.
Odokotela banxusa labo abasebenzisa uhlobo lukagwayi i-E cigarette ukuthi baqaphele izimpawu ezifana, nokukhwehlela, ukunqanyukelwa umoya, ubuhlungu besifuba, ukuphalaza, ubuhlungu esinyeni kanye nokushisa. Uma ababhema lo gwayi benalezimpawu kufanele bathole usizo ngokushesha ngoba lokhu kungasho inkinga kanti uma kungelashwa kungadala umonakalo omkhulu.
Ngokombiko weSundayTimes siyenyuka isibalo sentsha ebhema ama-E cigarretes kuleli. Abazali nabo bayabavumela abantwana babo ukuthi babheme lolu hlobo lukagwayi ngoba bekholwa wukuthi awunabo ubungozi obufana nogwayi ojwayelekile. Eqinisweni nayo ivaping ingadala izinkinga eziningi esingabala, isifo sofuba, inkinga yokuphefumula kanti ingambulala futhi oyibhemayo uma engasheshanga wathola usizo.
"Buningi ubufakazi obuveza ukuthi i-E cigarettes inobungozi emgudwini wokuphefumula, iphinde idale nezinkinga ekuphefumuleni nakwezinye izindawo emzimbeni," kusho iNational Council Against Smoking.